एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ,हर हर महादेव ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ,हर हर महादेव ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ
हर हर महादेव ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ
यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ । स्थानीयहरुले यसलाई दैवी चमत्कार मान्छन् । उनीहरुको मान्यता के छ भने यो आगो उतिखेर निभ्ने छ जब धर्तिमा महाप्रलय आउनेछ ।यो आगोलाई हेर्न मानिसहरु टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् । यो आगोको बारेमा भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धान पनि गरेको छ ।खोजपछि वैज्ञानिकहरुले ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन् । सोही कारण आगो निरन्तर बलेको हुनुपर्छ ।
यो पनि -महिलाका यी ७ र’हस्यहरु , जानकारीका लागि पुरा पद्नुस !
एजेन्सी, पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अ’स्ति’त्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् ।
महिलाका ७ रहस्यहरु
१.एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे महिला पुरुषसँग मात्र आ’कर्षित हुन्छे भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा एक महिला अर्की महिलाको दुश्मन ठानिएपनि महिलाले महिलालाई एकदम प्रेम समेत गर्छन । कतिपय महिलालाई आ’कर्षक बनेर हिँड्ने महिलालाई बारम्बार देख्न मन समेत लाग्ने गर्छ ।२. पूर्व प्रेमीको निगरानी केटीहरुले विवाह भएपछि वा नयाँ प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि पहिलो प्रेमीलाई विर्सन सक्दैनन् । उनीहरुले पूर्व प्रेमिका गतिविधी नियालीरहेका हुन्छ्न् । उ कहाँ जान्छ । कोसँग भेट्छ वा कस्ता फेसबुक अपडेट राख्छ भन्ने कुरा केटीहरुले विचार गर्छन् ।
६. इर्श्या कुनै पनि महिलाको लागि प्राकृतिक गुण नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विवाह गरेपछि हतारमा आमा बन्न नचाहने केटी अरुका सन्तान देखेर भने इर्श्या गर्छन् । आफूलाई महिलाका स’मस्याका कारण दुखाइ वा पीडा हुँदा पतिलाई पनि त्यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो उनीहरुलाई लाग्छ ।७. रहस्य जान्ने इच्छा हरेक महिलालाई आफ्ना पुरुष साथी वा पतिप्रति केही न केही कुरा लुकाएको संका हुन्छ । उनीहरु त्यो कुरा जान्न चाहिरहेका हुन्छन्
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं !ॐॐ ॐ !